အကယ်၍ Apple သည်ဟေး Siri ကို Mac ပေါ်တွင်တရားဝင်ခွင့်မပြုပါက၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့ activate လုပ်လိမ့်မည် ငါက Mac ကပါ
အကယ်၍ Apple က“ Hey Siri” အား Mac ပေါ်တွင်တရားဝင်ခွင့်မပြုပါက၎င်းကိုသက်ဝင်လှုပ်ရှားလိမ့်မည်
Jordi Gimenez | | MacOS Sierra, လဲ tutorial
ယခုကျွန်ုပ်တို့ Siri 10.12 ကိုကမ္ဘာတစ်ဝန်းတွင်လွန်ခဲ့သောနာရီအနည်းငယ်ကစတင်မိတ်ဆက်ပေးခဲ့သော MacOS မှတစ်ဆင့် Siri ကိုရွေးချယ်ခွင့်ရှိသည်။ အမှန်တရားကတော့ Mac operating system ဗားရှင်းအသစ်ကကျွန်တော်တို့ကို Apple လက်ထောက် Macs ဆီရောက်ရှိလာတာနဲ့အမျှအရေးကြီးတဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေကျန်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်အဲဒါက iOS မှာပဲ watchOS မှာ iOS မှာလုပ်သလိုတိုက်ရိုက် activate လုပ်ဖို့ခွင့်မပြုတာ ဒါမှမဟုတ် tvOS မှာ၊ ဟေ့ Siri »နဲ့အသံထွက်ကျယ်။ ကောင်းပြီ၊ ဒီနေ့လက်ထောက်ရဲ့ activation ကို voice command နဲ့ဒီအရာအားလုံးကိုလုပ်ဆောင်နိုင်အောင်လှည့်ကွက်လေးတစ်ခုတွေ့လိမ့်မယ် တတိယပါတီများထံမှမည်သည့်အရာမှတပ်ဆင်ရန်မလိုအပ်ပါရိုးရိုးစနစ်၏အသုံးပြုနိုင်စွမ်းရွေးချယ်စရာများမှတဆင့်။
လှည့်ကွက်သည်သတ်ဖြတ်ခြင်းကိုတိုက်ရိုက်စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ခြင်းနှင့်ကီးဘုတ်အတိုကောက်၊ မီနူးဘားရှိ Dock သို့မဟုတ် Dock ကိုသုံးခြင်းမရှိဘဲ Siri ကို activate လုပ်ရန် "ကုဒ်" တစ်ခုကိုထုတ်လုပ်ခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ Mac ကိုပြောခြင်းဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်ငါတို့လုပ်မယ့်အရာက ၀ င်ခွင့်ပါ System preferences နှင့် Accessibility ကိုနှိပ်ပါ။ အဲဒီမှာငါတို့ activate လုပ်ရမှာက "သတ်ပုံခေါ်ခြင်းခလုတ်ကို Activate" ဆိုတဲ့ရွေးစရာပါ။ ဒါကိုလုပ်ဖို့ကိုနှိပ်ပါ Dictation preferences ကိုဖွင့်ပါ ကြောင်းပြတင်းပေါက်ရဲ့အောက်ခြေမှာပုံပေါ်ပါတယ်။
အခုလုပ်မယ့်ဟာကိုအရင်လုပ်မလုပ်ရင် activate လုပ်ပါ အသုံးပြုမှုကိုတိုးမြှင့်သတ်ပုံခေါ်ခြင်း option ကို အဆိုပါ Dictation tab ကိုအပေါ် WiFi ကွန်ယက်နှင့်ချိတ်ဆက်စရာမလိုဘဲသတ်ပုံကိုသုံးရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ Mac ပေါ်တွင် 900 MB download လုပ်လိမ့်မည်။ ပြီးဆုံးသောအခါကျွန်ုပ်တို့သည်သုံးစွဲနိုင်သောမီနူးသို့ပြန်သွားပါ သတ်ပုံခေါ်ခြင်းစာလုံးကိုဖွင့်ရန်ရွေးစရာကိုကျွန်ုပ်တို့ရပြီးပြီ။ ဤအပိုင်းတွင် Siri ကိုသက်ဝင်စေမည့်စကားလုံးကိုရေးရပါမည်။ သင် "Hey Siri" ကိုသုံးနိုင်သည်မှန်သော်လည်း Hey ကိုပြောင်းရန်အကြံပြုလိုသည် (ပုံတွင်တွေ့ရ) "Hey" (သို့) "Hello" Siri အတွက် ... ဤအရာသည်အသံကျယ်ကျယ်ပြောသောအခါဤအင်္ဂါရပ်ကိုထောက်ပံ့သောကိရိယာများအားလုံးကိုသက်ဝင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
သတ်ပုံခေါ်ခြင်းအတွက်သော့ချက်စာလုံးကိုပြုပြင်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီအဆင့်ကိုရွေးရမယ် option ကို "Activate Advanced Commands" ကိုရွေးပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ voice command add ရန် "+" ကိုနှိပ်ပါ.
ပြောနေသောအခါ: "Siri" ထည့်ပါ
အသုံးပြုနေစဉ်: "မည်သည့် application" ကိုရွေးချယ်ပါ
Run: "Open Finder times" ကိုရွေးပြီး Siri အပလီကေးရှင်းကိုမတွေ့မချင်း "Applications" ဖိုင်တွဲကိုသွားပါ
ယခုတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ Mac မှ Siri ကိုကျွန်ုပ်တို့၏ iOS ထုတ်ကုန်များ၊ watchOS နှင့်အခြားနည်းတူအသုံးပြုရန်အဆင်သင့်ရှိနေပြီ။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် "Hey Siri" ကို "Hey Siri" သို့မဟုတ် "Hello Siri" ကိုပြောင်းလိုက်ပြီဆိုတာမှတ်မိရမယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Apple » လဲ tutorial » အကယ်၍ Apple က“ Hey Siri” အား Mac ပေါ်တွင်တရားဝင်ခွင့်မပြုပါက၎င်းကိုသက်ဝင်လှုပ်ရှားလိမ့်မည်
ပါစီ salgado ဟုသူကပြောသည်
လုံးဝကို disable လုပ်ဖို့ရေးတဲ့အမှားကဘာလဲ။ ငါပညာရေးကွန်ယက်ကိုစီမံခန့်ခွဲ
Percy Salgado သို့ပြန်သွားပါ
Far ဇာက်သည် Farre ရီကို ဟုသူကပြောသည်
၂၀၁၁ ခုနှစ်အစောပိုင်းကကျွန်ုပ်၏ Macbook pro သည်သတ်ပုံခေါ်ခြင်း ဦး စားပေး panel ကိုဖွင့်ရန်ရွေးစရာကိုမပြပါ
Isaac Farré rico အားပြန်ပြောပါ
ဟယ်လို siri ဘာမှမလုပ်ဘူးလို့ငါပြောရင်ငါလုပ်ခဲ့ပြီးပြီ
ကောင်းပြီ၊ ငါပြီးပြီ၊ ပြီးပြည့်စုံတယ်။ သင်ဘယ်မှာထားလဲ၊ ဘယ်ကိုထားလဲ၊ ခြေလှမ်းများအကျင့်ကိုကျင့်ခြင်းဖြင့်သင်ခန်းစာခြေလှမ်းအောက်ပါ
Adrian Lijo Alvarez နေရာရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူပုံ ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ အဆင့်အားလုံးကိုလုပ်ပြီး "Hi siri" လို့ပြောပြီးဘာမှမလုပ်ပါဘူး ဖြစ်နိုင်လို့လား
Adrian Lijo Alvarez အားပြန်ပြောပါ
အော်စကာတစ် ဦး Pulido Acevedo ဟုသူကပြောသည်
အကယ်၍ သင်သည်ဤဆောင်းပါး၌ Jordi အကြံပြုခဲ့သည့်အတိုင်းလုပ်ဆောင်ပါက“ Siri” ဟူသောစကားလုံးကိုသင်ပြောရမည်ဖြစ်ပြီးလျှောက်လွှာသည်သက်ဝင်လိမ့်မည်။
အော်စကာတစ် Pulido Acevedo အားပြန်လည်ပြောဆိုပါ
မင်္ဂလာပါ၊ အလွန်ကောင်းသောလက်တွေ့ကျသောဥပမာ၊ ကျွန်ုပ်အတွက်အကျိုးရှိသည်၊ သို့သော် အကယ်၍ ကျွန်ုပ်၏ mac ကိုယခင်ပြည်နယ်သို့ပြန်လိုချင်ပါကမေးခွန်းတစ်ခုမှာပြုပြင်မွမ်းမံမှုများပြုလုပ်စရာမလိုပါ။ Mac သို့မဟုတ်၎င်းကိုငါပယ်ဖျက်နိုင်ပြီး၎င်းကို ၁၀၀% ချန်ထားခဲ့နိုင်သည်။ ငါဒါကိုလုပ်တော့မှာမဟုတ်ဘူး။ ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာသိဖို့လိုတယ်၊ ငါချရေးလိုက်တယ်။ မင်္ဂလာပါနှင့်စိတ်ကူး website ။ ဂုဏ်ယူပါတယ်။
Mac ပေါ်တွင်သင်ပြုလုပ်ထားသော download သည် Apple မှလာသည်။
ငါ "ဟေး" ထားပြီးပြီperfectlyုံအလုပ်လုပ်တယ်။ စမ်းသပ်ခြင်း၊ လျှောက်လွှာတွေဖွင့်တယ်၊ အီးမေးလ်တွေ၊ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ပေါ်မှာတင်တယ်၊ ရာသီဥတုအချက်အလက်တွေမေးတယ်၊ ငါအများကြီးကစားခဲ့တယ်၊ 🙂
ငါအချက်တွေအားလုံးကိုလိုက်နာတယ်၊ ဒါကအလုပ်မလုပ်ဘူး။ Hello Siri လို့ဘာမှမဖွင့်ဘူး၊ ဘာဖြစ်တာလဲငါ့ကိုပြောပြနိုင်မလား?
Juan Carlos, ကောင်းသောနံနက်။
အကယ်၍ သင်သည်ဤဆောင်းပါး၌ Jordi အကြံပြုခဲ့သည့်အတိုင်းလုပ်ဆောင်ပါကသင်သည် "Siri" ဟူသောစကားလုံးကိုပြောရမှာဖြစ်ပြီး application ကသက်ဝင်လိမ့်မည်။
Juan Carlos, ကောင်းသောနံနက်။ Sierra update မွာ Siri ကိုသက်ဝင်စေဖို့ကျွန်တော်တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်လိုက်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ပြproblemနာက application ကအလုပ်မလုပ်ပါဘူး၊ ဒါပေမယ့်အသံဘယ်တော့မှမသိရပါဘူး ။ အသံထည့်သွင်းမှုဘားတွင်အရာအားလုံးကိုအသက်သွင်းထားသော်လည်းသင်ယခင်ကကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်ခဲ့သည့်မည်သည့်အရာကိုမျှမကြားရပါ။
ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်ကင်းမဲ့မှုအားသင်၏အချက်အလက်များကို Apple သို့ထပ်မံပေးပို့ခြင်း… ..
Safari 10 ကို OS X El Capitan နှင့် OS X Yosemite တို့အတွက်ရနိုင်သည်
MacOS Sierra ရှိသင်၏စာရွက်စာတမ်းများနှင့် Desktop ဖိုင်များကိုသင်၏ iPhone မှ macOS မှရယူပါ